कामकाजीकै हुन्छ ज्यादा आलोचना – Chitwan Post
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फाल्गुन ९, २०७६
हिँड्ने गोरूकै धेरै पुच्छर निमोठिन्छ र उसैको तिरको भागमा काँधे पनि हालिन्छ, अर्थात् जुन कामकाजी छ र फुर्तिलो पनि छ उसैमाथि आशा, भरोसा र अपेक्षा पनि हुन्छ । विकृत सामाजिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक जीवन भोगेर गुज्रिरहेको नेपाली मनोविज्ञान एककिसिमले नकारात्मक छ । यसर्थ, सानोतिनो विषयमा समेत माथापच्चिसी गर्नु र तिललाई पहाड बनाउनु यसको विशेषता बन्ने गरेको छ ।
राणा शासन ढल्यो तर ढलेन राणातन्त्र । पञ्चायती तन्त्रको अवसान त भयो तर पञ्चेपनाको भएन कहिल्यै अन्त्य । राजतन्त्र भयो अन्त्य तर राजतन्त्रीय पद्धतिको कहिल्यै भएन अन्त्य । यसैले तन्त्र फेरिए पनि संस्कार फेरिएन नेतृत्वको । संस्कार फेरिएन कर्मचारीतन्त्रको र संस्कार फेरिएन हुनेखाने वर्ग र कतिपय ठूला–साना सञ्चारमाध्यमको पनि । हुन त, नरकारात्मकता भरिएका कतिपय लेखक, सम्पादक र संवाददाता आदि इत्यादिमा कसैमा थोरै–धेरै पूर्वाग्रहले काम गरिरहेको होला र कसैमा अरुका हण्डी खाएको थोरै–धेरै गन्ध निकाल्नुपर्ने स्थिति पनि होला र सदाबहार यी हुन्छन् आक्रामक नै ।
खोट निकाल्नमा अभ्यस्त पारखीहरुले त चन्द्रको षोडश कलामा पनि फेला पार्छन् खोट । मर्यादा पुरूषोत्तम मानिएका राम, बुद्ध, यशु, कन्फुसियस, महात्मा गान्धी आदि इत्यादिमा पनि फेला पार्छन् खोटहरु । सीता, सावित्री, वृन्दा हुँदै पतिपरायणा नारीमा पनि फेला पार्छन् खोटैखोट । हिमालय, हिमताल र प्राकृतिक दिव्यछटाहरुमा पनि भेट्छन् कमजोरीहरु । खोज्न थाले कमीकमजोरी हुँदैनन् कसका र ?
दक्षिण अफ्रिकालाई स्वतन्त्रता दिलाउने नेल्सन मण्डेला, चीनलाई विकासको उन्नत गतिमा पु¥याउन मह¤वपूर्ण भूमिका खोल्ने देन जियाबाओ, सिंगापुरलाई समृद्धिको शिखरमा आरोहित गर्ने नेतृत्व, जर्ज वासिङ्टन, अब्राहम लिंकन आदि इत्यादि नेतृत्वहरुभित्र पनि भेटिन्छन् कमजोरीहरु र गर्नेहरुले गर्छन् उन्मुक्तरुपमा तिनको पनि आलोचना । आलोचना निर्जीव वस्तुको त हुन्छ भने सजीव जीवको नहुने कुरै भएन, त्यसमा पनि मानिसको । अझ त्यसमा पनि सारा नागरिकको अभिभावकत्व ग्रहण गरेका सरकारको हुन्छ नै, त्यसभित्र पनि प्रधानमन्त्रीको हुनु त अस्वाभाविक लाग्दैन मलाई ।
धेरै आलोचना त्यसैको हुन्छ जो बढी गतिशील छ र कर्ममा अर्जुनदृष्टि राख्छ । अल्छे, कामचोर र निष्कर्म भएर बस्नेको पनि आलोचना हुन्छ नै, तर उसलाई गर्न गालीका अनगिन्ती शब्दभण्डारबाट जति शब्द ग्रहण गरे पनि त्यसको रुप र सार एउटै हुन्छ । तर, कर्मशीलको हरकोणबाट सुरूमा निन्दा नै हुन्छ । बिस्तारै त्यो निन्दा उसले गर्ने सत्कर्मसँगै प्रशंसा, स्तुति र सम्मान हुँदै भक्तिमा रुपान्तरित हुन थाल्छ । प्रायः वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली सम्पादकहरुलाई बोलाएर पत्रकारले हेपेको, गुणग्राही नभएको, उनीहरु मात्र दोषग्राही रहेको गुनासो गर्छन् । आपूmले राम्रा काम गर्दा पनि त्यसको गलत मतलब मात्र निकाल्ने प्रवृत्तिप्रति उनी सधैँ दुःखी देखिन्छन् ।
हो, यातायातको सिन्डिकेट, वैदेशिक रोजगार, युवा स्वरोजगार, योगदानमा आधारित पेन्सन, फास्ट ट्रयाक आदि इत्यादि कार्यक्रमहरु सरकारका राम्रा भन्न मिल्ने काम थिए । तर, त्यसको प्रचारकै दुष्प्रचार गरी कार्यक्रमको तेजोवध गर्ने काम गरिँदा सरकारप्रमुख नै पहिले उत्तेजित र पछि दुःखी बने । राम्रा कामलाई त छायामा पार्ने प्रयास भएकै थियो तर अझ सुन तस्करी, निर्मला पन्त हत्या प्रकरण, यति होल्डस, त्रिविबाहेकका विश्वविद्यालयहरुका पदाधिकारी नियुक्ति, ललिता निवास जग्गा प्रकरण र त्यसमा दायर मुद्दाजस्ता कतिपय नसुल्झिएका पहेलीहरु नसुल्झिदासम्म आलोचना सहनुको विकल्प देख्दिनँ म ।
प्रसङ्गवश भारतबाट लिपुलेकसहित कालापानी मिचिएको, ललिता निवास जग्गा घोटाला, अब उठाइँदै गरेको मातातीर्थस्थित सरकारी जग्गा घोटाला जुन उनीअघिका सरकारका पालामा भए गरिएका थिए ती उनका कार्यकालमा फटाफट उजागर भइरहेका छन् । प्रतिपक्षी दलको नेताले सस्तो लोकप्रियताका लागि बोल्ने अभिव्यक्ति सरकारप्रमुखका हैसियतमा कम्तीमा अहिलेसम्मका कार्यकारी प्रमुखले सार्वजनिकरुपमै भन्न नसकेको ‘कालापानी नेपालको अभिन्न भूमि हो र यहाँबाट विदेशी सेना हट्नुपर्छ र त्यो भूमि खाली गरिदिनुपर्छ’ भन्नु र कूटनीतिक पहलकदमी लिनु आफैँमा आँटिलो कार्य हो । हो, यहाँ यो पनि भन्न छुटाउनुहुन्न कि दशकौँसम्म यस विषयमा बोल्न नसकेको नेपाली कांग्रेसले पनि खुलेर सरकारलाई साथ दियो र समर्थन ग¥यो र अरु राष्ट्रिय पार्टीले पनि उत्तिकै दिएका थिए साथ । यसकै बलमा देशका पक्षमा केही सकारात्मक परिणाम आइहाल्छ कि भन्ने जनतामा आकाङ्क्षा पलाएको थियो । तर, त्यो हुन सकेन र यसैले सर्वसाधारणबाट नेतृत्वको आलोचना हुनुलाई दुःखको विषय मान्नु किमार्थ हुन्न ।
हुन पनि कालापानी, लिपुलेकजस्ता अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्ने विषय जनताले चाहेजस्तै र सरकारले निर्णय गर्नेबित्तिकै समाधान हुने होइन । लामो तर सक्षम कूटनीतिक प्रयास, अनवरत छलफल, आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख आर्थिक, भौतिक आदि स्थिति भएपछि मात्र न्याय पाइने विषय हो । आशा गर्नु आप्mनो ठाउँमा छ तर छिमेकीको जमिन अतिक्रमण गर र देशको भौगोलिक बदल भन्ने नीति लिएको भारतबाट तत्काल प्रतिफल खोज्नु पनि अपरिपक्वता नै हो कि भन्ने लाग्छ । नेपाल–भारत सन्धि, सम्झौता आदि इत्यादिको अध्ययनार्थ आफैँले गठन गरेको बौद्धिक वर्गले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्न नचाहने अनुदार भारतीय नेतृत्वले नेपालका समकक्षीको चेतावनीपूर्ण आग्रहलाई स्वीकार गरिहाल्ने स्थिति पनि छैन र अन्तर्राष्ट्रि«य अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिहाल्ने आन्तरिक र बाह्य परिवेश रहेको पनि म देख्दिनँ । किन पनि भने सबै सम्भावना शून्य बनेको स्थितिमा जाने हो र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि हाम्रो साथ र समर्थन गर्ने स्थिति बनेपछि मात्र दर्ता गर्दा न्याय पाइने सम्भावना रहन्छ ।
यो स्थिति पनि छैन अहिले नेपालको । यसर्थ, परिपक्व नेतृत्वले उत्तिकै दूरदर्शिता अपनाउनु अपेक्षित हुन्छ र त्यो रुप पक्षबाट हेर्दा निर्वाह नगरिएको जस्तो प्रतीत भए पनि सारमा हेर्दा वर्तमान सरकारले जति गर्न सक्थ्यो र गर्नुपथ्र्यो त्यो गरेको छ । तर सरकारले कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, सुस्ता आदि आप्mनो भूमिलाई समेटेर अब त एउटा आधिकारिक नक्सा जारी गर्न सक्नुपथ्र्यो । त्यो पनि गर्न नसक्नुचाहिँ मलाई लाग्छ कमजोरी हो । केही दिनअघिमात्रै रक्षामन्त्री स्वयं कालापानी पुगेर कूटनीतिक कम राजनीतिक अभिव्यक्ति दिएर फर्किएका छन् । रक्षामन्त्रीको हैसियतमा व्यक्त वाणीले राजनीतिक वृत्तमा एउटा मह¤व राख्ला । खासगरी, नेपाली समाज मनोविज्ञानलाई चुम्बकले चुम्बकीय वस्तुलाई झैँ आप्mनो केन्द्रतिर आकर्षित गरिराख्नलाई ।
जहाँसम्म आलोचना सरकारको कदम अल्पकालीन निन्दा तर दीर्घकालीन प्रशंसामा परिणत हुने हुुनुचाहिँ वाञ्छनीय हुने देख्छु म । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले महादेवले झैँ निन्दारुपी हलाहल विष पान नगरेको भए आज काठमाडौँका गल्लीहरु असनका गल्ली र गल्छेडा जस्तैमा सीमित रहन्थे । हिजो निन्दा गर्नेहरु आज उनका अरु केही कामको निन्दा गरे पनि सडक विस्तारका निम्ति उनलाई धन्यवाद नै दिइरहेका हुन्छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अन्तश्चक्षु खोलेर हेरे भने पत्रकार, कलाकार, लेखक आदि इत्यादि साँचो अर्थमा उनका शुभेच्छुक रहेको देख्छु म । उनले त सम्झनुपर्ने हो कि धन्न उनीहरुले कमजोरी देखाइदिरहेछन् सित्तैमा । बालुवाटारवरिपरि घुम्नेहरु प्रायः बाङ्गो रुखलाई पनि सुरिलो भन्ने र सीधा अनि सुरिलो छ भने त्यसलाई पनि हँसियाझैँ बाङ्गो छ भन्नेहरु हुन्छन् । तिनका सस्ता प्रशंसाबाट जोगिनु र आलोचकका वाणीहरुबाट राजहंसले झैँ आपूmलाई चाहिने सल्लाह र सजगता ग्रहण गर्नुचाहिँ बुद्धिमानी हुने देख्छु म ।
यस मानेमा उनको अध्यक्षतामा गठित संघीय सरकारले गरेका त्रुटि, कमीकमजोरी र ढिलासुस्तीहरु जुन उनको छायामा परिरहेको हुनसक्छ, ती नजरमा नपरेका र दृष्टिमा पर्न नदिइएका विषयहरु पनि हुनसक्छन् । हिजोको विकृत राजनीतिक संस्कृतिको जगमा बनेका मन्त्रीगण र कर्मचारीतन्त्रले प्रलोभनमा परी गल्ती गर्ने सम्भावना रहन्छ । तिनैलाई सरकारप्रमुखले देखे पुगेसम्म सचेत गर्ने हो । तिनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो । तर, आप्mनो दृष्टि नपुगेका ठाउँहरुमा लेखक, पत्रकार आदि इत्यादिले ध्यानाकर्षण गराउँदा आलोचना गरिएको भनेर मात्र बुभ्mनु र गुनासो गर्नुचाहिँ प्रजातान्बिक संस्कृतिमा हुर्केको नेतृत्वलाई शोभा दिनेजस्तो लाग्दैन मलाई । हुन त, अरुको हण्डी खाएर लेख्ने कतिपय पत्रकारले सधैँ असल काममा पनि खोट नै देखाउँछन् नै । तर, ‘नबिराउनु नडराउनु’ भन्ने तथ्य बुझेको सरकार त्यसबाट विचलित हुनुपर्ने देख्खिनँ म । ‘काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्तै गर्छ, कुकुर भुक्तै गर्छ हात्ती लम्कदै गर्छ’ भन्नेजस्ता लोकोक्तिबारे प्रधानमन्त्री आफैँ जानकार छन् ।
हो, एउटा दूरदर्शी, सक्षम र गम्भीर नेतृत्वले कहिल्यै पनि कसैको क्षणिक प्रशंसा या स्तुतिलाई मह¤व दिँदैन । बरू, त्यो पवित्र भावनाले गरिएको होस् या पूर्वाग्रह वा आग्रह जुनसुकै भावनाले गरिएको किन नहोस्, सबै खाले आलोचना सुन्छ, मनन गर्छ र त्यसलाई आप्mनो चिन्तनको भट्टीमा पकाएर त्यसबाट शिक्षा र दीक्षा ग्रहण गर्दै विकृतिलाई कम गरी रचनात्मक कार्य गर्नमा त्यो ऊर्जाको उपयोग गर्दछ । किन पनि भने सस्तो प्रशंसाले व्यक्ति र सरकारको मति नष्ट पार्छ र खराब कर्म गर्न उत्प्रेरित गर्दछ । तसर्थ, प्रधानमन्त्रीले सम्पादक, पत्रकारस“ग निडर भएर समाधानसहितको सिर्जनात्मक आलोचना गरी सधैँ मार्ग निर्देश गर्न आग्रह गर्नुपर्छ ।
खोजपत्रकारितामार्फत स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीले कहीँकतै अनियमितता गरेको भए निस्वार्थताका साथ समयमै देखाएर राष्ट्रनिर्माणको महान् कार्यमा सघाउन अपिल गर्नुचाहिँ वाञ्छनीय हुने देख्छु म । तबमात्र सरकारले व्यवस्था बदलिए पनि प्रशासनिक संयन्त्र उही केन्द्रवादी तथा अहंकारग्रस्त मनोविज्ञानबाट प्रेरित रहेको र उच्च तहमा कार्यरत कर्मचारीतन्त्रलाई पनि जनदबाब रहेको भन्दै उसलाई सही कार्य गर्न निर्देशन दिन प्रशस्त ऊर्जा मिल्न सक्छ । यसर्थ, सरकार क्षणिकरुपमा प्रशंसाप्रिय होइन आलोचनाप्रिय नै बन्नुपर्छ । अहिलेको अलोकप्रियतापछिको प्रशंसैप्रशंसा हो । यसर्थ, सरकार अहिले सराहना नखोज । स्वस्थ र सुन्दर आलोचनाप्रिय बन्नुपर्छ र कमीकमजोरी देखाउनेलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ ।